Ii-FAQs - iNanchang Eco Hardware Products Co, Ltd.
1.Ndingayifumana njani ikowuteshini?
-Nceda usinike iinkcukacha zakho zesicelo (isitayile, ilogo, ubungakanani, umbala, ubungakanani, njl.njl), sishiyele ukubuza okanye i-imeyile kwaye siza kuphendula kwangoko!
2.Ufumana njani isampulu yasimahla?
-Singabonelela ngeesampulu zethu ezikhoyo ngoku simahla ukujonga isimbo kunye nomgangatho!
-Ngokuba isampulu kunye nelogo yakho, umrhumo wokungunda uya kuhlawuliswa ngesiseko.
3. Uyihlawula njani iodolo?
-T / T, umanyano lwaseNtshona, iigrafu
Isiqinisekiso seAlibaba sokurhweba kwi-Intanethi: Boleto, Mastercard, Visa, e-Checking, Pay later, L / C, ect.
4. Ndingakuthemba njani wena nenkampani yakho?
-Siyinkampani yegolide kunye nekhredithi kwi-alibaba, sigxile kubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi, sisebenze namawaka abathengi ukusukela oko inkampani yakha i-12 kwiminyaka eyadlulayo, abathengi bahlala besenza intetho yokuncoma
5. Yintoni inkqubo yoku-odola?
-Sithumele uPhando → ufumane ikowuteshini → intlawulo yenziwe → umzobi wethu we-deisgn umzobo kwaye uwuthumele kuwe ukuze uvunywe → uvule uvule kwaye wenze iisampulu → ukuhambise iisampulu okanye ukukuthumela imifanekiso yeesampuli ukuze zamkelwe → imveliso yobuninzi.
6.Ndingalindela nini ukuba imveliso egqityiweyo igqitywe?
Isampulu: Iintsuku zokusebenza ezi-7 ukuya kwezi-10 (ezisemgangathweni).
Uku-oda ngobuninzi: iintsuku ezingama-20-25 zomsebenzi (umgangatho).
7.Ingaba uqinisekisa ukuhanjiswa okukhuselekileyo nokukhuselekileyo kweemveliso?
8.How malunga nemirhumo yokuthumela?
Ukuhanjiswa kunye nokuhanjiswa ngenqanawa
Ukuthumela ngenqwelomoya, iCouirer (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, ect), ukuthunyelwa kolwandle (FCL / LCL).